Dr.Abiyyii Ahimad: RIB keessa Amaarri sadarkaa tokkoffaarra.. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDr.Abiyyii Ahimad: RIB keessa Amaarri sadarkaa tokkoffaarra..
Dr.Abiyyii Ahimad: RIB keessa Amaarri sadarkaa tokkoffaarra..
Dr.Abiyyii_Ahimad : RIB keessa Amaarri sadarkaa tokkoffaarra jira, Tigireen 2ffaa, Oromoon 3ffaa….akkasumatti adeema.
#Hasaa_muummichi_ministeeraa #Dr_Abiyyii_Ahimad waajjira isaaniitti taasisan keessaa yaadotni lamaan kun akka malee qalbii nacabsan!! Hamilee Qeerroofi Qarree illee kan eege miti!!
1- RIB keessa Amaarri sadarkaa tokkoffaarra jira, Tigireen 2ffaa, Oromoon 3ffaa….akkasumatti adeema. Reform iin keenya akka bishaan Haaydirijiinii1fi Oksijiinii 2 of keessaa qabutti walqixxeessuu hin dandeenyu!! Sababiinsaa kun ogummaa professional dha waan ta’eef…..
Maal jechuudhaa? Oromoon professional ta’e hin jiru jechuudhaa? Oromoon waraana kana hogganuuf gahumsa hin qabu jechuudhaa? Haalli kun har’amoo bor sirraaya? Jennee otoo eegaa jirruu abdiin keenya biddeena abjuu ta’e. Qophaawummaa hir’ina kana sirreessuu illee hin qaban. Kun qaaniidha! Oromoon kanaaf profetional ta’e hin jiruhechuun Arrabsoodha! Tuffiidha! Saba salphisuudha! Bakkasaan qaanaye!!
Seenaa Yoo ilaalle Waraana Minilik dadhabe Goota Oromoo Goobanaa Daaceetu itti ergamee cabsa ture! Gabayyoo Gurmuufi Baalchaa Safoo dabalatee, Hayile Sillaaseen Janaraal Taaddasaa Birruutu hoggana! Dargiis Damisee Bultoofaati! Wayyaanee keessattis ta’u kanneen akka B/J Kamaal Galchuufi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa diinaaf ergamtuu hintaanu jedhanii aangoosaanii jibbanii gammoojjiitti galan malee otoo garaaf bulanii jiraatan har’a bakka Saamooraa namni isaan dura qabatu hinturre!
Duuba Dr Abiyyi maal jechuu barbaadee? Oromoon RIB keessatti akka saba irra wayyaba ta’een caalee hin argamu taanaan yoomillee salphina keessa jirru keessaa nibaana jedhanii eeguun gowwummaa ykn maraatummaadha!!
Kun hin ta’u taanaan Oromoon waraana mataa ofii cimsatee salphina irraa of baraaruu qaba!
Dhiiroo, akka amantaakootti Qeerroon Oromoo RIB kana keessatti waraana hogganuu haaturuuti saatelaayitii hawaatti ergitee deebisuuf eenyuyyuu gararraatti sammuu gabbataa qabdi! Kanaaf professional gaafata jechuun akka H2o /akka component bishaaniitti sirreessuu hindandeenyu jechuun Qeerroo arrabsuudha!
2-Addis Ababa maqaan jettu kun Haalaan nibareeda!………garuu /magaalittiin akka maqaashee…hinbareeddu…./ Jedhe dabalees Dr Abiyyiin….
Maqaan kun seenaakoo, eenyummaakoo hin ibsu!! Haqakootu dabe! Bakkatti naaf haadeebiyu!….jedhee Oromoon Finfinneen maqaa ofiisela isheetiin akka yaamamtu lubbuusaa kitima gochaa otoo jiruu, maqaa biyya keenyaa weerartootni diinaa moggaasteef beekamumtii kennuun dhiiga eenyuutiin akka bakkicha san qabate dagachuusaa mul’isa!!
Hedduun itti gadde!!
Jaalatus jibbus, yoo biyyi kun itti haafuftu jedhame, RIB keessatti humni Oromoo wayyaba ta’uu qaba!!
Jajjaboo Oromoo kanneen akka Koloneen Gammachuu Ayyaanaa hidhanii kaayanii Oromoon gahumsa waraanaa hin qabu jechuun gochaa soddoota isaa kaleessaa irra deebuudha!
Keenya jennee obsinee teenyaan namichi garam garamitti adeemaa jiraa?? Akkam akkamimmoo yaadaa jiraa? Akkamitti akkas nuxiqqeesse????
Namni kun gatii baasuuf jira!!
Amhara Regional Government military at war with..
በአዲስ አበባ-በፊንፊኔ ሕገ መንግስቱ ይከበር!ኦሮሚያ ልዩ መብት ያላት ..